Shina azo antoka, vy tsy mahazaka afo, hidin-kaody amin'ny fantsom-panondro, karazana orinasa sy mpamokatra azo antoka rehetra | Boda
Miaraka amin'ny fampivelarana ny siansa sy ny teknolojia, ny safidin'ny androany dia nivoatra avy amin'ny asa fanalahidy tsotra indrindra amin'ny karazana halatra tsy tambo isaina, toy ny fanoherana halatra, fisorohana afo, fanoherana halatra, porofon'afo, fanoherana andriamby, ankohonana, orinasa, hotely , basy, antontan-taratasy, data sns.
Noho ny fanaka fiasana manokana sy ny fanoherana ny halatra dia mila jerena manokana ny safidin'ny azo antoka. Ny fisafidianana ny fiarovana dia azo dinihina amin'ny lafiny manaraka:
Safidy fitaovana lovia 1.Steel: manavaka ny hateviny, ny fitaovana ary ny niandohan'ny takelaka vy, izay misy ifandraisany amin'ny fahafaha-mitondra ny azo antoka rehefa mampiasa fitaovana manokana toy ny fandavahana elektrika sy ny fanapahana.
2.Forming sy welding: zahao raha miforona indray mandeha ny vatan'ny kabinetra, zahao raha ny elanelana misy eo amin'ny varavaran'ny kabinetra sy ny vatan'ny varavarana, ary raha malefaka ny switch. Raha lehibe loatra ny banga, dia hihalefaka ny fiasan'ny fanoherana ny prying. Ho an'ny fiarovana azo antoka amin'ny afo, tsy avela ny banga lehibe loatra.
Firafitry ny tradisiona: io no fototry ny fiarovana. Satria ao anaty boaty ilay izy, tsy hitan'ny mpampiasa izany, fa io no lakile hisorohana ny fisokafan'ny teknika. Ireo mpampiasa dia afaka mangataka amin'ny mpivarotra hanokatra ny fonony aoriana ao ambadiky ny tontonana varavarana hijerena raha marina ny firafitry ny nentin-drazana anatiny ary raha malefaka ny fampitana. Ho fanampin'izay, tokony hojerentsika koa ny firafitry ny hidin-trano. Tokony hohamafisina ny savaivon'ny bolt hidy. Ankehitriny ny endrika fanidiana hidy malaza dia misy vokany tsara fanokafana.
4.Lock: raha ny firafitry ny nentim-paharazana dia ambonin'ny, ny hidin-trano no teboka manan-danja indrindra. Ny fanimbana ny hidin-trano na ny fanahafana ny lakile dia mitovy amin'ny fanimbana ny fon'ny mekanisma fanoherana ny halatra. Ny hidin-trano sarotra dia afaka misoroka tsara ny fahasimbana sy ny fanaovana kopia fototra.
Fizarana 5.Auxiliary: ny fanodinana ireo kojakoja fanampiny dia tokony hiantoka ny fahamendrehana amin'ny asany mba hiatrehana ny tontolo iainana miovaovaova.
6.Fampandrenesana fanairana: misy fiasan'ny fanairana mandeha ho azy, ary amin'ny toe-javatra sasany dia azo omena ny fanairana mandeha ho azy (toy ny mihetsika, mikapoka na kaody telo diso). Mazava ho azy, ny manan-karena kokoa ny fepetra fampahavitrihana, ny tsara kokoa. Amin'izao fotoana izao, safira maro no tsy manana fiasan'ny fanairana mandeha ho azy, na vitsy ny fepetra fampidirana fanairana mandeha ho azy. Mila manontany tsara ianao rehefa mividy.
7.Ny fitsaboana amin'ny harafesina Anti: raha tsy voatazona tsara ity fizotrany ity dia hisy fiatraikany amin'ny fisehon'ny boaty, ary amin'ny tranga matotra dia hiteraka fahavoazana amin'ny asa izany. Ny loko anatiny sy ivelan'ny fiarovana azo antoka amin'ny halatra dia tokony hosodoko, hofafazana plastika ary fitsaboana hafa manohitra ny harafesina. Milina azo antoka.
8. fisehoana: be sy be monoton dia tsy azon'ny mpanjifa intsony ny azo antoka. Ataon'ny olona ho haingon-trano io. Voalohany indrindra, diniho raha malama ny lokon'ny tany ary miloko ve ny loko. Faharoa, diniho sao an'ny loko ankafiziny ny loko sy ny endrika, ary atambaro amin'ny tontolon'ny birao tena izy hividianana.
9.Size: refeso ny haben'ny azo antoka arakaraka ny tena ilainao. Raha apetraka eo amin'ny zoron'ny rindrina dia tsy ilaina ny mandinika be loatra ny habeny. Raha mila apetraka amin'ny toerana miafina izy, toy ny kabinetra dia 50 sm ny haben'ny zaridaina ary ao anatin'ny 30kg ny lanjany. Tsara homarihina fa ny ankabeazan'ny safes misy haavo maherin'ny 50 sm dia misy kodiarana ambany ary azo afindra na aiza na aiza. Ankehitriny dia misy habe sy famaritana maro hafa azo antoka. Amin'ny ankapobeny, ny haben'ny ambony indrindra dia mety mihoatra ny 100cm. Azo namboarina ihany koa izy io. Maharitra 15 andro ny fanamboarana azy.
10.Battery: natao ho an'ny teny miafina elektronika azo antoka. Ho fanampin'ny batterie namboarina dia ny boaty miafina elektronika amin'ny ankapobeny dia misy boatin'ny bateria ivelany. Rehefa mividy dia mila mijery tsara ianao raha efa vita io. Ny marika BOSENDA azo antoka koa dia misy fampisehoana herinaratra eo amin'ny tontonana, izay afaka manome fahafaha-manao betsaka amin'ny tena fandidiana.
BOSENDA azo antoka manome famaritana feno ny fiarovana boaty / azo antoka, fiarovana-fanoherana boaty / azo antoka amin'ny asa samy hafa sy ny famaritana voalaza etsy ambony, lanja azo namboarina mifanaraka amin'ny mpanjifa takiana, lakile fanalahidy, rantsan hidin-trano, hidin-trano hidin-trano azo omena araka filàna samihafa, fitaovana avy amin'ny takelaka vy tsotra ka hatramin'ny lovia vy tena mafy, namboarina mifanaraka amin'ny filàna isan-karazany. Famokarana isam-bolana an'arivony maro isam-bolana, fandefasana haingana, hisorohana ny ora fiandrasan'ny mpanjifa. Famokarana amin'ny fahombiazana avo, fifehezana henjana ny rohy rehetra.
Previous: Manitatra fantsika amin'ny visy, visy fanitarana plastika, volo fanitarana scew fantsika, clip azo ovaina
Manaraka: Grinder zoro, fandavahana fiatraikany, tantanana, fandavahana li-ion, fitaovana mandeha amin'ny herinaratra